ဒေါသူပုန် ထနေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ သီရိလင်္ကာပြည်ကြီးကို မွတ်စလင်များ အတွက် ငရဲဘုံအဖြစ် ဖန်တီးနေ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Furious Buddhists Are Making Life Hell for Sri Lanka’s Muslims
Warning to Myanmar Foreign Ministry and Myanmar Home Affairs Ministry about Human Rights violations »
သြဂုတ်လ- ၂၇ ရက်၊ ၂၀၁၃ ဘာသာပြန်ဆို – မြင့်မိုရ်မောင်မောင် မူရင်းဆောင်းပါးရှင်- Joseph Cox
This entry was posted on August 28, 2013 at 7:34 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.